Madaxweyne Garguurte oo Gudoomiyeyaashii Hiiraan iyo Bay u kala eexday-qabyaalad
Topnews:- Madaxweyne Garguurte oo Gudoomiyeyaashii Hiiraan iyo Bay u kala eexday-qabyaalad
07 July 2013 Waagacusub.com-Madaxweyne Hassan Garguurte ayaa qunsulka Safaaradda Saudi Arabia u magacaabay Gudoomiyahii Gobolka Hiiraan ee xilka qaadista uu ku sameeyay halka uu ka cagajiidayo inuu xil u magacaabo Gudoomiyahii Gobolka Bay Abdifitah Geeseey .
Madaxweynaha Somalia oo isku mar xilka qaadista ku sameeyay Labada Gudoomiye wuxuu hore u balanqaaday inuu xilal muhiima u magacaabi doono hasse yeeshee nasiibdaro wuxuu xil siiyay Gudoomiyahii Gobolka Hiiraan Abdifitah Hassan oo ay isku yihiin beesha Hawiye ,halka uu dhinaca kalena ka soo jeeda beesha Xawaadle ee Garguurte abtiyaashiisa.
Odayaasha dhaqanka Digil iyo Mirifle ayaa aad uga xumaaday eexda uu ku dhiiraday Hassan Garguurte,waxayna xeeldheerayaashu qabaan in tan iyo markii la doortay uu luminayo kalsoonida beelaha taageersan ee Soomaaliyeed.
Kala fogaanshaha beelaha Soomaaliyeed iyo Madaxweyne Hassan ayaa sabab looga dhigay taageerayaashiisa oo siinaya talooyin dhamaantood fashil horseedaya.
La taliyayaasha xun talooyinka ay siiyeen oo uusan ku liibaanin waxaa ka mid ah Magacaabidii golaha Wasiiradda oo uu madaxweynuhu aaminay in tiro yar oo wasiiro ah oo ka kooban 10 wasiir in wanaagu ku jiro, arintaas oo madaxweynaha iyo Raisul wasaarahaba ay kala kulmeen culeys aad u badan oo dawladda ka lumiyey waqti badan sidii Baarlamaanka loo marsiin lahaa.
Talooyinka xun oo ay la taliyayaashiisu siiyeen balse uusan madaxweynahu ka fikirin cawaaqibka ka imaan karey ayaa waxaa ka mid ahaa magacaabidii taliyayaasha Booliska Gen Saacid iyo Nabad sugida qaranka Gen Bashiir Goobe, arintaas oo u keentay in beelo mucaarad ku ahaa uga faaiideysteen, qasabtayna in Beesha Digil iyo Mirifle oo ka mid ahayd beelaha aadka u taageersan Madaxweynaha iyo Raisulwasaaraha ka hor yimaadaan, keeneena mooshin lagu ridayey Xukuumada, ka noqoshada mooshinkaas oo Madaxda qaranka ku qaadatay waqti badan iyo balan qaadyo ay beelaha qaar u sameeyeen, balan qaadyadaas oo beeluhu ka sugayaan.
Falalka cajiibka ahaay oo Madaxweynaha Soomaaliya ku dhaqaaqayey , falalkaas oo maadxweynaha culeysyada badani saaran yihiin ku keenayay culeysyada waxaa ka mid ahaa , jirdilkii dhowaan qaar ka mid ah ciidamada dawladdu u geysteen odoyaal dhaqameed soomaaliyeed oo dawladdu shaqo u dirsatay, shaqadiina soo qabtay, balse abaalkood laga dhigay in qoryaha baadkooda iyo liifkooda lagu garaacay, xabsigana la dhigay, xeeldheerayaasha arimaha dhaqanka iyo siyaasadda ayaa sheegaya in dawladduu suuragal ka dhigi kartay in Xasan Daahir la wareegto, odoyaasha dhaqankana aan jirdil lagu sameynin, xabsina la dhigin.
Sidoo kale Dawladda ayaa la sheegayaa inay ilaa iyo haatan aysan fulin heshiiskii ay la gashay ASWJ goboladda dhexe, arintaan oo iyadana laga yaabo in dawladda mustaqbalka uu culeys uga imaan doono.
Waxyaalaha kale oo Cajiibka ah kuna keenay dawladda in taageerayaasheedu ka niyad jabaan ayaa waxaa ka mid ah dagaaladii dhowaan ka dhacay Kismaayo oo ciidamada dawladda iyo qabaailka taagersan oo si xoog ah looga saaray magaalada Kismaayo oo dawladu ku sheegtay laba maliishiyo beeleed inuu dagaalku u dhaxeeyey.
Isku soo wada duube siyaasada Madaxda Dawladda oo uu ugu horeeyo madaxweynaha ayaa la sheegayaa inay dawladu ku keeni doonto mustaqbalka dhow in dawladda mucaarado uga furmaan gobolo badan oo haatan laga taageersan yahay. Halkaan ka Daawo Warbixino xaqiiqa noqday.